38 Email Marketing Mejọọ Iji Lelee Tupu ingpị Send | Martech Zone
Enwere ọtụtụ ihe ị ga - eme na mmemme ịre ahịa email… mana nke a infographic si Email Ndị mọnk na-elekwasị anya na njehie ndị ahụ anyị na-eme tupu ịpị izipu. Ga-ahụ ihe ole na ole kwuru banyere ndị mmekọ anyị 250ok na imepụta na ịnapụta ọrụ. Ka anyị mafee ozugbo:
Tupu anyị amalite, ànyị edobere maka ọdịda ma ọ bụ ihe ịga nke ọma? Ndị nkwado anyị na 250ok nwere ngwọta dị egwu nke nwere ike inyere gị aka inyocha ihe niile gbasara aha email, nnyefe na ntinye igbe.
Dedicated IP - ekwela ka onye na - ezigara gị bibie ya na otu IP network nke ọrụ email gị.
Ntinye igbe - jiri igbe nleba anya igbe iji nyochaa ozi ịntanetị gị abụghị naanị inyefe ya na folda junk, ha na-eme igbe mbata.
Ngbapụta - Ahapụla ezigbo ozi email maka nke ọjọọ ma bibie ihe mgbapụta gị.
Ndị isi ojii - Gbalịa hụ na adreesị IP gị anaghị adị na aha onye na-ezigara ndị na-ezigara ya, ma ọ bụghị ya, ị nwere ike ịnweta nnweta ma ọ bụ ntinye akwụkwọ ozi adịghị mma.
domain - zipu ma debe ezigbo ngalaba email ka ị nwee ike iwulite aha gị (yana IP gị).
SPF - Ozi nzipu Ozi nhazi bụ ihe dị mkpa ka ISPs nwee ike Ndị ISP nwere ike nyochaa ma nata ozi ịntanetị gị.
Dkim - DomainKeys amata Mail kwe ka otu nzukọ were ọrụ maka ozi na-aga n'ihu.
DMARC - DMARC bu ihe nlere ohuru ohuru iji nye ndi ISP ihe ha choro ka email gi bia.
Nzaghachi Loops - Gbalịsie ike na ị nwere nzaghachi e mejuputara ka ozi sitere na ISP nwee ike kọọrọ gị ESP maka imelite ozi email ka mma.
Ndenye aha ndenye ego
Njikwa ndebanye aha bụ ihe dị mkpa maka mmemme ahịa email dị mma.
ikike - etinyela onwe gị na nsogbu na ISP. Rịọ ka e nye gị email.
Mmasị - nye ma tọọ atụmanya na oge maka ndị debanyere aha gị.
Ihe ọ bụla - wepu ndị debanyere aha na-adịghị arụ ọrụ iji belata mkpesa na enweghị ntinye aka.
Frequency - atụgharịla ugboro ole dị elu nke na ndị debanyere aha gị hapụ.
Nkewa - ị nyochara ọnụọgụ abụọ na izi ezi na nkewa gị?
Nke a bụ ebe ego ahụ dị mana ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eme ụfọdụ mmejọ ọdịnaya.
Na-agwụ ike isiokwu e - ọ bụrụ na ịchọrọ ka mmadụ mepee, nye ha ihe kpatara ya! Lelee ActiveCampaign's Subject Generator maka enyemaka.
Na-agba akaebe - ị gụgharịrị ederede gị maka okwu ụtọasụsụ na nsụpe okwu? Kedu maka ụda olu?
CTA siri ike - mee ka Oku gị na-Action kwụpụta na ekwentị ma ọ bụ desktọọpụ!
FNAME - Ọ bụrụ n’ị nweghị aha ndị debanyere aha gị niile, agwala ha! Ma ọ bụ jiri mgbagha gaa.
Jikota Fields - nwalee data gị niile tupu izipu ihe osise na ọdịnaya dị egwu ga - emetụta gị.
iche - nwale nzụlite gafee ndị ahịa email… ọtụtụ anaghị eji ha.
bọtịnụ - jiri onyonyo dị ka bọtịnụ ka bọtịnụ gị wee dị oke mma na ndị ahịa email niile.
Mmekọrịta ụwa - ị na - eji ntọala na akara ngosi kwesịrị ekwesị maka ndị debanyere aha gị?
Typography - jiri font jiri ọdịda daa azụ maka ngwaọrụ na ndị ahịa na-anaghị akwado ha.
Social - ị nwere njikọ na akaụntụ mgbasa ozi gị ka ndị mmadụ wee nwee ike ịme enyi ma soro?
Ndị nkwado anyị na 250ok nwere preview nhọrọ ihuchalu email gị gafee ọ bụla isi email ahịa.
Ihe mkpirisi - nwalee email ahụ iji hụ usoro izizi mbụ gị na nyocha email na-akpali akpali
Alt - jiri ihe odide na-akpali akpali na ihe oyiyi ọ bụla.
ule - usoro nyocha, njikọ, CTAs, personalizaiton, nyocha na ọdịiche.
Akwukwo - obere obere edemede na akwụkwọ ndị edoghị anya na-eme ka m zere iso gị na-azụ ahịa.
Akuko - tinye usoro nkwekọrịta maka ogologo, ozi ịntanetị nkewapụtara ka ọ dị mma.
Retina - jiri ihe onyonyo mkpebi dị elu etinyere maka retina ngosipụta nke ngwaọrụ Apple nke oge a jiri.
anabata - Gbalịsie ike ka email gị dị oke mma na ngwaọrụ mkpanaka na mbadamba. Nwere ike ịgbakwunye ihe ejiji, n'oge na-adịghị anya!
Email Send achọpụta ego
Nhazi nke email ahụ na otu o si arụ ọrụ mgbe ọ ruru na igbe mbata onye debanyere aha gị nwere ike imetụta ntụkwasị obi gị yana pịa-site na ntụgharị gị.
Site na Adreesị - jiri 'Site na Adreesị' nwere ike ịmata
Zaghachi Na Adreesị - kedu ihe ị ga - eji mee @ @ mgbe enwere ohere ijikọ ma ree?
Na-akpali Nkwanye - Gbalịsie ike mee mkpọsa mkpọtụ gị n'ụzọ ezi uche dị na ya.
Links - ị nwalere njikọ niile na email ahụ tupu izipu ndị debanyere aha ha niile?
Ibe akwukwo - wuo peeji nke ntụgharị dị elu na mpaghara ole na ole.
akuko - ijide stats, nyochaa ha, ma melite mbọ ị na-agba n'ịntanetị email.
nnabata - you nwere ozi niile dị mkpa maka ịkwado iwu zuru oke na n'okpuru gị?
[igbe ụdị = ”download” mmezi = ”aligncenter” klas = ”” obosara = ”90%”] Download Email Ndị mọnk 'ngwa ngwa nyochaa nyocha nke ihe iji tulee tupu izipu. Ọ bụ nnukwu obere PDF! [/ Igbe]
Tags: dkimDMARCDomainKeys amata Mailemail kwadoroemail ndaberebọtịnụ emailemail CTAemail edemedeemail ugboroemail mba uwaemail jikota ubiemail ikikeemail retinaahịrị ederede emailemail mgbanwe ndido urụknyocha emailederede ederede emailemail wepu aha yaFNAMEImagendị anaghị edebanye ahaikikeanabataretinaspfike CTAsikike onye debanyere ahammasị ndị debanyere ahannọchi ndido urụk
kwenye kpamkpam na mmejọ ahịa email ndị a.
A na m echekwa na ndị a bụ mmejọ a na-emekarị nke ọtụtụ ndị ahịa email na-eme. Izipu ozi-e nwere isiokwu na-agwụ ike bụ mmejọ a na-ahụkarị.
Anaghị m emeghe email ọ bụla nke na-adịghị adọta anya m. Ana m eleghara ma ọ bụ hichapụ ozi-e ndị dị otú ahụ mgbe niile.
Ndị ahịa email kwesịrị ịghọta na ọ nweghị onye chọrọ igbu oge ha n'ịgụ ozi ịntanetị na-agwụ ike. Ọ bụrụ n'ezie na ị chọrọ tọghata ha mgbe ahụ ị ga-ezipụ ozi ịntanetị na-enwe anya catchy, mara mma na-ekwe nkwa isiokwu ahịrị. N'ihi na ọ bụ naanị ahịrị ndị na-agụ akwụkwọ na-ebu ụzọ gụọ.
Ya mere ilekọta ya nwere ike imeziwanye nkà gị.
Obi dị m ụtọ na ị depụtala ihie ụzọ email niile bụ isi ebe a ka anyị wee mụta ha wee zere ha. Daalụ maka ịkọrọ anyị ya. 😀